फ्याट्टै भाइरल भइयो भने...
पुष्पा थपलिया मंगलबार, फागुन १८, २०७७, १७:१६
काठमाडाैं- एकताका युट्युबको ट्रेन्डिङमा पर्ने नाम थियो, गुराँस नानी। उनलाई धेरै युट्युबरले अन्टसन्ट प्रश्न सोधेर भाइरल बनाए। सञ्चार माध्यममा कसरी प्रस्तुत हुने, के बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने मात्रै हैन, बिचरा गुराँसनानीलाई सामाजिक सञ्जालमा फेक एकाउन्ट हुन्छन् भन्ने पनि थाहा थिएन।
त्यसैले उनले फेक आइडीबाट आएका म्यासेजलाई सही मानिन्। अनमोल केसीले म्यासेज पठाइरहने, अझै अनमोलको प्रेम प्रस्ताव नै आएको, प्रेम गीतका निर्माताले फिल्म खेल्न आग्रह गर्दा रिजेक्ट गरेको जस्ता कुरा युट्युबका लागि डलर कमाउने गतिलो बाटो बन्यो। कतिले उनको कुरा विश्वास नगरेपछि रुँदै मेसेज देखाइन्, जुन फेक आइडीबाट आएका थिए।
टिकटकमा सक्रिय निकेश उर्फ निकिसा श्रेष्ठ पनि गुराँस नानी जस्तै भाइरल बनिन्। जन्मदा छोरा भएर जन्मिए पनि निकिसा आफूलाई छोरीको भूमिकामा प्रस्तुत गर्न रुचाउँछिन्। अर्थात् उनी ट्रान्सजेन्डर महिला हुन्। लगाउने कुरा ध्यान नदिनु, भद्दा मेकअप गर्नु र कुन प्रश्नको उत्तर कसरी दिनुपर्छ भन्ने नजान्नुले उनले निकै दुःख पाइन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको मेमे र ट्रोल छ्यापछ्याप्ती भयो।
अहिले यही भाइरलको बिडो धानिरहेका छन्, बालक सचिन परियारले। उनको बोल्ने शैली मीठो छ। त्यही कारण अहिले युट्युबको थमनेलमा उनको फोटो नै ट्रेन्डिङमा उक्लनका लागि काफी छ। 'के छ हजुर' र 'ठिक छ हजुर'ले सचिनलाई यतिसम्म भाइरल बनायो कि, महानायकको पगरी गुथेका राजेश हमालले समेत सचिनसँग कम्मर मर्काए। उनलाई पढाउन पैसा छैन भनेका बाबुको कपाल काटेको भिडियो समेत भाइरल हुन्छ अहिले।
माथिका पात्रहरु प्रतिनिधि हुन्। फोटोग्राफीक ट्यालेन्टको नाममा भाइरल भएका बिजय शाही, होचो केटोले अग्लो केटी बिहे गरेको भन्दै चर्चामा आएका बखत र प्रतिभाका जोडी, तरकारीवाली भनेर भाइरल भएकी कुशुम श्रेष्ठ, बाटोमा मागेर बस्ने र हँसिलो कुरा गर्ने भीमबहादुर, हाँस्यब्यंग्य शैलीमा रमाइलो तरिकाले जवाफ दिने दिल्लीराम खनाल,आफूलाई अघोरी बताउने 'बाबा', पत्रकार र अभियन्ता भन्ने पुन्य गौतम, दोहोरी गाउन सक्ने बालिका कमला घिमिरे, टंक बुढाथोकीको छत्रछायाँमा रहेका बालक अशोक दर्जी आदि। यसको सूची निकै लामो छ।
अहिले त झन् टिकटकका कारण हरेक दिन मानिस भाइरल हुन्छन्। एक्कैछिन अघिसम्म कसैले नचिनेको मान्छेलाई एक्कासी धेरैले चिन्ने बन्दा कस्तो रियाक्ट गर्छन् होला? भाइरलको स्वाद चाखिसकेकी गायिका एलिना चौहान भन्छिन्, 'त्यो चर्चा चलिरहेको बेला म नभएर अरु नै कोही होला जस्तो लाग्छ।'
कभर गीत भाइरल भएकै कारण आज उनि चर्चित गायिकाको स्थानसम्म आइपुगेकी छन्। तर, यसको शिकारमा नराम्रोसँग फसेकी गायिका पनि हुन् एलिना। उनले युट्युबलाई अन्तवार्ता दिँदा दिँदा शिक्षिकाको जागिरबाट हात धुनुपरेको थियो। स्कुलमै अन्तवार्ता लिनेहरुको लाम लाग्न थालेपछि स्कुलले उनलाई बिदा गरिदियो। जागिर हातबाट उम्किएपछि अन्तर्वार्ता लिनेहरु पनि उनको नजिक भुनभुनाउन छाडे।
त्यस्तै, भाइरलको चक्करमा जागिरबाट हात धोएका थिए बखत र प्रतिभाको जोडीले पनि। जागिर खानै नभ्याउने गरेर अन्तर्वार्तामा व्यस्त हुन थालेपछि उनिहरु काम गरिरहेको रेस्टुरेन्टबाट निकालिए। जागिर गुमाएपछि भने यो जोडीले अन्तर्वार्ता लिन आउनेसँग कुराकानी गरेबापत शुल्क लिन थालेका थिए। पैसा माग्न थालेपछि भने अन्तर्वार्ताकार उनिहरुसँग भाग्न थाले।
भाइरल भएकै कारण जागिर गुमाउनेमा गुराँश नानी पनि पछिन्। अहिले भने उनि एउटा युट्युब च्यानलमा द गुराँसनानी शो चलाउँछिन्। यता निकिसाको आमाले त यो सबै मिडियाको सत्यनाश होस् भनेर श्राप नै दिएकी थिइन्।
कसरी सम्हाल्ने रातारातको चर्चालाई
नेपालको मनोरञ्जन बजार सानो छ। निकै चल्तीमा रहेका र वर्षमा लाखौं कमाउने सेलिब्रेटीले समेत गतिलो सल्लाहकार राख्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सञ्चार माध्यममा आउँदा उनिहरुको तालमेल मिलिरहेकै हुँदैन। यस्तो अवस्थामा रातारात चर्चा कमाउने कलाकारलाई सम्हाल्नु सजिलो काम हैन।
रियालिटी शाेका कारण रातारात चर्चा कमाएकालाई भने अन्य भाइरललाई जस्तो समस्या छैन। नेपालमा आएका केही फ्रेन्चाइज रियालिटी शाेका प्रस्तोता तथा निर्माता सुशिल नेपालले रियालिटी शाेका बिजेतालाई एक वर्षको कन्ट्रयाकमा राख्नुको कारण उनिहरुलाई सम्हाल्नु नै रहेको बताए। उनका अनुसार, रियालिटी शाेले रातारात स्टार बनाइदिन्छ। त्यो चर्चालाई ऊ एक्लैले धान्न सक्दैन। ल्यायो स्टार बनाइदियो र एक्लै छोडिदियो गर्दा उसले मास बुझ्न पाउँदैन।
'रातारात चर्चामा आएको मानिसलाई स्टार बनाउन नै एक वर्षको सम्झौता गरिएको हुन्छ', सुशिलले भने, 'रियालिटी शो जितेपछिको सम्झौता अवधिमा उनिहरुले संस्थाको अनुमतिबिना केही गर्न पाउँदैनन्।' यही कुरा नबुझेर भारतका नेपालीभाषी बसोबास गर्ने स्थानमा गायक प्रशान्त तामाङ खलनायक बनेको पनि सुशिलले बताए।
रियालिटी शो जस्तै मिस नेपालले आफ्ना बिजेतालाई एक वर्षसम्म विभिन्न कार्यशालामा सहभागी गराउने, सञ्चार माध्यममा कसरी प्रस्तुत हुने, व्यक्तित्व विकास कसरी गराउने भन्ने शिक्षा दिइरहेको हुन्छ।
रियालिटी शाेबाट भाइरल भएकाहरुलाई जस्तै अन्य माध्यमबाट भाइरल भएकाहरुलाई पनि सम्हाल्ने अभिभावकको आवश्यकता रहेको सुशिलको भनाइ छ। उनले भने, 'विभिन्न प्रतिभावान मानिसको प्रतिभा राम्रो अभिभावकत्व नभएका कारण गुमाइरहेका छौं, यो हाम्रा लागि बिडम्बनाको कुरा हो।'
चर्चामा पुग्नेबित्तिकै विभिन्न गाली गलौजको वर्षा पनि हुन थाल्छ। सुशिल भन्छन्, 'त्यस्तो समयमा उसलाई सही मार्ग देखाउन सकिएन र त्यस्ता नराम्रा प्रतिक्रियाबाट टाढा राख्न सकिएन भने उनिहरु मानसिक समस्यामा देखापर्न सक्छ।
निकै लामो संघर्ष गरेर चर्चामा आएका मानिसलाई समेत चर्चा धान्न मुस्किल पर्छ। यस्ता घटना धेरै भएको भन्दै सुशिलले भने, 'झनै यहाँ त कतिपय मानिस थाहै नपाइ भाइरल भइरहेका छन्। उनिहरुलाई मानसिक समस्या, कुलत लगायतमा फस्न नदिन गतिलो मार्गदर्शक नभइ हुँदैन।'
मनोरञ्‍जन क्षेत्रका लागि कालो वर्ष २०७७ : भविष्य झन् अन्योल
महामारीको निराशालाई केही हदसम्म इतिश्री गर्ने ‘श्री’
कलाकारलाई के सोच्छौं हामी !
सोनु सूदलाई कोरोना संक्रमण बलिउड अभिनेता सोनु सूदलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको सोनुले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन्। शनिबार, वैशाख ४, २०७८
कोरोना खोप अभियानको 'ब्रान्ड एम्बेसडर' बने सोनु कोभिड-१९ संक्रमणको दोस्रो लहर चलेसँगै भारतको पञ्‍जावमा नायक सोनु सुद खोप अभियानको 'ब्रान्ड एम्बेसडर' बनेका छन्। सोमबार, चैत ३०, २०७७
राज कपुर र दीलिप कुमारको पाकिस्तानी घर अब संग्रहालय बलिउडका दुई चर्चित कलाकार दीलिप कुमार र राज कपुरको पाकिस्तानमा रहेको घरलाई संग्रहालय बनाइने भएकाे छ। पाकिस्तानका खैबर पख्तुनख्वाह रह... बुधबार, चैत २५, २०७७
आमा सम्झिँदै ऋचाले दिइन् आमा बन्न लागेको जानकारी बुधबार, वैशाख १, २०७८
नाम परिवर्तन गर्ने नेपाली नायिका : करिष्मादेखि पुजनासम्म सोमबार, चैत २३, २०७७